आइएमएले माग्यो केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षबर्धनसँग स्पष्टीकरण
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन ११, २०७७, ०९:३९
भारतीय चिकित्सक संघ (आइएमए)ले भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षबर्धनसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै आइएमएले रामदेवको कम्पनीले बताएको कोरोनाको औषधी कोरोनिल सार्वजनिक गरेकोमा डा. हर्षवर्धनसँग स्पष्टिकरण मागिएको बताएकाे छ। डा. वर्धनसँग आइएमएले विभिन्न प्रश्नसमेत सोधेको छ।
यसअघि शुक्रबार डा. हर्षवर्धन बाबा रामदेवले बनाएको औषधी सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेका थिए।
आफ्नो औषधीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वीकृति दिएको रामदेवको छ । तर, स्वास्थ्य संगठनले भने यसको खण्डन गरेको थियो।